‘ईलुस्ट्रेटर’ जीत गुरूङ - Mardi News
जीत गुरुङ वास्तवमा ‘ईलुस्ट्रेटर’ अर्थात पुस्तक चित्रकार हुन । नेपालमा प्रकाशित भएका धेरै पुस्तकहरूमा उनको रेखा चित्रले भरिएका छन । बालकथा, कविता, धार्मिक कथा, कमिक्स आदि चित्रहरू बनाएका छन् उनले । विदेशी नियोग, पुस्तक प्रकाशक र संघसंस्थाहरु (हेल्पटास, आईएनएफ आदि) का पुस्तकको भित्रि तथा पृष्ठको आवरण चित्रहरू बनाएका छन् । उनको रेखा चित्रमा सिद्वहस्त, निपुर्ण र प्रभाविलो छ । उनको यही विशेषताले राजधानीलगायतका स्थानहरुबाट समेत पुस्तकहरूको चित्र बनाउन आउने गर्छ ।
जीत गुरुङले तयार पारेका पुस्तक तथा पत्रिकाका कभर चित्रहरू
उनको कलाको पृष्ठभूमि भने कार्टुन अर्थात ब्यङ्गय चित्र हो । सानै उमेरदेखि आफु कमिक्सबाट निकै प्रभावित भएको गुरुङ बताउँछन् । त्यसैले स्कुल पढदा उनि कार्टुन चित्र बनाउने गर्थे । अमरसिंह माध्यामिक विद्यालय पोखरामा पढ्दै गर्दा त्यतिबेला ‘कमिक्स नेपाल’ बनाएर सय प्रति बिक्री भएको उनी सम्झन्छन् । अहिले आफुसंग त्यतिबेला बनाएको कमिक्स एक प्रति पनि नभएको गुरुङ बताउँछन् । त्यसबेला पोखरामा जीत गुरुङको कार्टुन चित्रमा खुबै चर्चा थियो । प्रत्येक वर्ष कामनाबाट प्रकाशित हुने गाईजात्रे अंक हास्यव्यङ्गय पत्रिकामा उनको कार्टुन छापिन्थ्यो । पोखराका वरिष्ठ पत्रकार कृष्णप्रसाद बास्तोलाद्वारा प्रकाशित आदर्श समाजमा दैनिकमा जीतको कार्टुन साप्ताहिक रूपमा छापिन्थे । उनी कार्टुन स्तम्भकारको तर्फबाट नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको २०५८ सालमा सधारण सदस्य लिएका थिए ।
उनले २०५४ सालमा व्यावसायिक रूपामा साईन बोर्ड पसल ‘मुनाल आर्टस्’ रानीपौवा पोखरामा खोले । यसबाट उनको लागि सम्पर्क माध्यम बढ्दै गयो र प्रचार प्रसारमा पनि । परिश्रमी र मिहेनती जीत गुरुङ पोखराबाटै प्रकाशित हुने ‘तमु मञ्च’ र ‘आदिवासी जनजाति मञ्च पाक्षिक’ पत्रिकाका नियमित कार्टुनिष्टकार पनि हुन् ।
हरेक काम मन लगाएर गर्ने उनले आप्mनै दाइ नारायण गुरुङबाट मूर्तिकलाको काम पनि सिके । तमु प्ये ल्हु संघमा रहेका संग्रहालयमा मुर्ति बनाउने काममा यिनै दाजुभाइबाट बनाएको मूर्तिहरु छन् । साइनबोर्ड बनाइरहेका उनी समयको परिवर्तनसंगै नेपालमा फ्लेक्स प्रिन्ट मेसिन भित्रिएसँगै उनले पनि फ्लेक्स मेसिन सुरु गरे । परम्परागत साईन बोर्ड पेशा हराउदै गएकाले पनि समयअनुसार चल्न उनले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरे । केही वर्ष राम्रै गरेपनि उनलाई त्यस मेसिनले भनेजस्तो काम दिन सकेन । प्राविधिक समस्याले बेलाबेलामा बिग्रिरहने गर्दा उनले फ्लेक्स मेसिन हटाइसकेको छ । मेसिन हटाइसकेपनि कामलाई पनि फ्लेक्सको काममा भने कुनै कमी हुन दिएका छैनन् ।
आजभोलि सबै डिजाइन इलुस्ट्रेटरको कम्यूटरकै माध्यमबाट गर्ने गर्छन् । पेन्सिल स्केच, तेल रंग र एक्रेलिक रंगबाट पेन्टिङ्ग पनि राम्रो बनाउने उनले थुप्रै गुरुङ गाउँको पेन्टिङले समाजघर सजिएको छ । त्यस्तै उनले बनाएका सिकलेस गाउका सुन्दर पेन्टिङ्गहरू हङकङ, युकेबाट पनि अर्डर गर्ने गर्छन । थुप्रै स्कुल तथा मन्टेश्वरीका भित्ताहरुमा उनको चित्रहरुले रङ्गिएको छ ।
यतिबेला भने उनी संग्रहालयको लागि मुर्ति बनाउनमा व्यस्त छ । २५ वर्षअघि मूर्तिमा हात हालेका उनले आधुनिक मूर्तिका लागि यूट्युबबाट हेरेर सिकेका छन् । सिक्लेसमा निर्मित तमु क्होईबो धीं तथा तमु संग्राहलयको लागि ख्याती प्राप्त गुरुङहरूको अर्धकदका सालिकहरू बनाएको छ । डा. हर्क गुरुङ, डा. चन्द्रप्रसाद गुरुङलगायतका करिब २०/२१ वटा मूर्ति बनाउने कार्यमा उनी व्यस्त छन् ।
Previous क्होलको पुनः उत्खनन् गर्न करिब ८८ लाख लागत लाग्ने, बजेट विनियोजनका लागि प्रदेश सरकारसँग माग
Next चराको बचेराको शिवपुरी–शुक्लाफाँटा हुँदै पोखरामा नाम जुर्यो
कलाकार तीर्थ निरौलाको भर्चुअल अनलाईन एकल चित्रकला प्रदर्शनी
४ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०७:१२ पदम घले
स्मार्ट सिटी पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय मुर्तिहरू अलपत्र [फोटो फिचर]
१ कार्तिक २०७७, शनिबार ०७:१९ पदम घले
६ महिना पछि पोखरामा डुंगा सञ्चालन, अझै पनि छैन डुङ्गा सयर गर्नेहरु
१० आश्विन २०७७, शनिबार १५:०६ मर्दी न्यूज
कोरोना संक्रमणबाट जापानमा १७ सय जनाको मृत्यु
गत २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप २६ जनाको मृत्यु
एकै दिनमा कोरोना संक्रमित हुनेमा आज अहिले सम्मकै उच्च, ५७४३ पुगे
५ कार्तिक २०७७, बुधबार २०:१६ मर्दी न्यूज
५ कार्तिक २०७७, बुधबार १६:२७ मर्दी न्यूज
५ कार्तिक २०७७, बुधबार १६:२२ मर्दी न्यूज
५ कार्तिक २०७७, बुधबार १६:१५ मर्दी न्यूज
५ कार्तिक २०७७, बुधबार १२:४७ मर्दी न्यूज